ကြက်သီးထဖွယ် စီးမျောနစ်ဝင်သွားလောက်အောင် သမိုင်းအဆက်ဆက် မြန်မာမှုကို ဖန်တီးပြီးချပြလိုက်တဲ့ Junior Creative အဖွဲ့ – ရှအေလငျး
Junior Creative အဖွဲ့ကတော့ Myanmar Got Talent ရဲ့ဝင်းနားဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ ဖိုင်နယ်ပွဲမှာ သူတို့ဖန်တီးခဲ့တဲ့ Shadow Dance ဟာ ပရိသတ်တွေနဲ့အတူ ဒိုင်တွေအပါအဝင် တစ်နိုင်ငံလုံးကိုပါ ကြက်သီးထဖွယ်ဖြစ်စေခဲ့တာပါ။ သက်ငယ်မုဒိန်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က ဖြစ်ရပ်တွေကို အခြေခံပြီးတော့ Shadow Dance ကိုပုံဖော်ဖန်တီးထားမှုဟာ ဒိုင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ချစ်သုဝေကိုပါ မျက်ရည်ကျစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးက ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုနဲ့ ထောက်ခံမှုကိုပါ ရရှိခဲ့တဲ့ ဖန်တီးမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့က Junior Creative အဖွဲ့ရဲ့ ဒုတိယတကြိမ်ဖန်တီးမှုတစ်ခုကို ပရိသတ်တွေ ထပ်မံတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီဖန်တီးမှုလေးဟာ ခေတ်အဆက်ဆက်က မြန်မာ့သနပ်ခါးအကြောင်းလေးတွေကို အလေးထားပြီးဖော်ပြဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ Junior Creative Dance Crew က မြန်မာမှုနဲ့ပက်သက်တဲ့အရာတွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်​စွမ်းတဲ့ အနုပညာ Shadow Dance နဲ့ လူအများကို ထုတ်ဖော်ပြသချင်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ … မြန်​မာမှုလို့ဆိုတဲ့​နေရာမှာ နိုင်​ငံတကာနဲ့ ကမ္ဘာ့အသိုင်းအ၀ိုင်း က သနပ်​ခါးကို မြန်​မာ့ပုံရိပ်​အဖြစ်​နားလည်​ လက်​ခံထားကြပါတယ်​ …အဲ့ဒီ့မြန်​မာ့သနပ်​ခါးကို ​ခေတ်​အဆက်​ဆက်​ သမိုင်းအဆက်​ဆက်​ရဲ့ ဟန်​​တွေနဲ့ မြန်​မာမှုဆန်​ဆန်​​လေး ကြိုးစား​လေ့လာပြီး အားပါးတရ ဖန်​တီးတင်​ဆက်​ထားပါတယ်​ … အခုတော့ ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာမှုနဲ့ Shadow Dance ကို အ​ကောင်းဆုံး စွမ်းနိုင်သမျှ ဖန်တီးပြီး အများပြည်သူ့​​ရှေ့​မှောက်​ကို ချပြနိုင်​ခဲ့ပါပြီ အဖက်ဖက်က ကူညီပံ့ပိုးပေးကြတဲ့ ကုမ္ပဏီနဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်​အ​ပေါင်းကို ​ကျေးဇူးအထူးအထူး တင်​ရှိပါ​ကြောင်း …..” လို့ သူတို့ပေ့ခ်ျကတဆင့် ဖန်တီးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုနဲ့ တင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဗီဒီယိုလေးမှာထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ နောက်ဆုံးမှာ သိရှိလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဖန်တီးမှုတစ်ခုလုံးရဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ရွှေပြည်နန်းသနပ်ခါးကြေငြာဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ ကြေငြာမှန်းမသိရလောက်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ ပြောင်မြောက်လွန်းလှတဲ့ဖန်တီးမှုကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ ချီးကျူးမှုတွေကို ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်သံဖိုင်အား ကြည့်ရှုရန် နှိပ်ပါ
Junior Creative အဖှဲ့ကတော့ Myanmar Got Talent ရဲ့ဝငျးနားဖွဈခဲ့ပွီးတော့ ဖိုငျနယျပှဲမှာ သူတို့ဖနျတီးခဲ့တဲ့ Shadow Dance ဟာ ပရိသတျတှနေဲ့အတူ ဒိုငျတှအေပါအဝငျ တဈနိုငျငံလုံးကိုပါ ကွကျသီးထဖှယျဖွဈစခေဲ့တာပါ။ သကျငယျမုဒိနျးမှုနဲ့ပတျသကျတဲ့ပတျဝနျးကငျြက ဖွဈရပျတှကေို အခွခေံပွီးတော့ Shadow Dance ကိုပုံဖျောဖနျတီးထားမှုဟာ ဒိုငျတဈဦးဖွဈတဲ့ ခဈြသုဝကေိုပါ မကျြရညျကစြခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ကမ်ဘာတဈဝနျးလုံးက ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုနဲ့ ထောကျခံမှုကိုပါ ရရှိခဲ့တဲ့ ဖနျတီးမှုတဈခုဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ဒီဇငျဘာလ ၂၃ ရကျနကေ့ Junior Creative အဖှဲ့ရဲ့ ဒုတိယတကွိမျဖနျတီးမှုတဈခုကို ပရိသတျတှေ ထပျမံတှမွေ့ငျခဲ့ရပါတယျ။ ဒီဖနျတီးမှုလေးဟာ ခတျေအဆကျဆကျက မွနျမာ့သနပျခါးအကွောငျးလေးတှကေို အလေးထားပွီးဖျောပွဖနျတီးထားတာဖွဈပါတယျ။
“ကြှနျတျောတို့ Junior Creative Dance Crew က မွနျမာမှုနဲ့ပကျသကျတဲ့အရာတှကေို ကြှနျတျောတို့ရဲ့တတျစှမျးတဲ့ အနုပညာ Shadow Dance နဲ့ လူအမြားကို ထုတျဖျောပွသခငျြခဲ့တာ ကွာပါပွီ … မွနျမာမှုလို့ဆိုတဲ့နရောမှာ နိုငျငံတကာနဲ့ ကမ်ဘာ့အသိုငျးအဝိုငျး က သနပျခါးကို မွနျမာ့ပုံရိပျအဖွဈနားလညျ လကျခံထားကွပါတယျ …အဲ့ဒီ့မွနျမာ့သနပျခါးကို ခတျေအဆကျဆကျ သမိုငျးအဆကျဆကျရဲ့ ဟနျတှနေဲ့ မွနျမာမှုဆနျဆနျလေး ကွိုးစားလလေ့ာပွီး အားပါးတရ ဖနျတီးတငျဆကျထားပါတယျ … အခုတော့ ကြှနျတျောတို့လုပျခငျြခဲ့တဲ့ မွနျမာမှုနဲ့ Shadow Dance ကို အကောငျးဆုံး စှမျးနိုငျသမြှ ဖနျတီးပွီး အမြားပွညျသူ့ရှမှေ့ောကျကို ခပြွနိုငျခဲ့ပါပွီ အဖကျဖကျက ကူညီပံ့ပိုးပေးကွတဲ့ ကုမ်ပဏီနဲ့ လူပုဂ်ဂိုလျအပေါငျးကို ကြေးဇူးအထူးအထူး တငျရှိပါကွောငျး …..” လို့ သူတို့ပခြေျ့ကတဆငျ့ ဖနျတီးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတဈခုနဲ့ တငျထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒီဗီဒီယိုလေးမှာထူးခွားတာတဈခုကတော့ နောကျဆုံးမှာ သိရှိလိုကျရတာဖွဈပါတယျ။ ဖနျတီးမှုတဈခုလုံးရဲ့ နောကျဆုံးမှာ ရှပွေညျနနျးသနပျခါးကွငွောဖွဈနတောဖွဈပွီးတော့ ကွငွောမှနျးမသိရလောကျအောငျဖွဈသှားခဲ့တဲ့ ပွောငျမွောကျလှနျးလှတဲ့ဖနျတီးမှုကွောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ ခြီးကြူးမှုတှကေို ခံခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။
မူးယစ်ဆေးတွေကို ရဲစခန်းအထိတောင်ပို့ရဲတဲ့ သတ္တိခဲ အမျိုးသမီး ၂ ဦး
“အ​မေဖြစ်​သူက သားဖြစ်​သူကို ဆုံးမရာမှ​လက်​လွန်​၍ သား​လေး​​သေဆုံးခဲ့ရ”
(၄)ကြိမ်မြောက် (၁၀၀၀)ကျပ်တန် အောင်ဘာလေထီပေါက်စဉ် သိန်းသန်းဆုကြီးများ ပေါက်ကြပါစေ ! ! !
သေဒဏ်ချမှတ်ခံရတဲ့ ဝင်းနဲ့ဇော် အကြောင်း ယနေ့ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့...
ဒီနေ့ အင်တာနက်မှာ ပြန်နှံ့နေတဲ့ ထိန့်လန့်ဖွယ် လူပေါင်း ၁၁ ယောက် တပြိုင်တည်း...
“WISDOM HILL ကျောင်းမှာ တိုက်ကွမ်ဒို နည်းပြအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ...